ကပ်ဖား၏နောက်လိုက်ကပ်တီးမူးလဲကောင်းမြတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကပ်ဖား၏နောက်လိုက်ကပ်တီးမူးလဲကောင်းမြတ်
Posted by kyawhan21 on May 2, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
ကောင်းမြတ်88 သတင်းသမားကျင့်ဝတ်နှင့်မညီ အမေရိကန်စပိုင်လို့များမိမိကိုယ်ကိုထင်နေလားတော့မသိပါ သေချာတာတစ်ခုက ကောင်းမြတ်88၏သတင်းအရင်းအမြစ်သည်အမှန်တကယ်ပြည်သူကိုအခြေမခံ blue black red တို့ကိုမြိုဆို့ရန်တကာခံသည့်ကပ်ဖားကိုအခြေခံသည်ကိုဆန်းစစ်မိသည်။ ကိုယ်ပိုင်စကားကိုမသုံး တချိန်ကသတင်းပေးကပ်ဖားရဲ့စကားဟန်ကိုသာသုံးသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပြည်သူကိုအခြေပြုသောသတင်းသမားမဟုတ်ကပ်ဖားနောက်လိုက်ကပ်တီးမူးလဲအစစ်သာလျှင်ဖြစ်တော့သည်
ဟဟ ကပ်တီး မူးလဲ ဆိုတာတော့ ဟုတ်မယ်ဗျ နိုင်ငံခြားအရက် အကောင်းစားတွေ ကို ကပ်တီးပြီး မူးလဲနေမှာထင်တယ်။ ငါးမင်းဆွေ လက်သစ်လေးကို5သိန်းတန် ဖုန်းတွေ တော့ ပေးနိုင်မယ်မထင် ကပ်ဖားကြီး မသုံးပဲ ပစ်ထားတဲ့ ဟန်းဖုန်း အခွံလေးတွေ ကို လည်မှာဆွဲပြီး လမ်းဘေးမှာ ခွေအိပ်နေမလားပဲ။ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် သောက်မှ မသောက်ဖူးပေပဲကိုး။
ပြီးတော့ ဘလော်ဂါ အမည်များခံလိုက်သေးတယ်။ MBS ကလူတွေ ကြားရင် အူလှိမ့်ပြီး ရယ်နေလိမ့်မယ် ဟဟ။
စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်တွေ အကြောင်း မသိရင်လဲ ဆရာ ဦးကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်)၊ ဆရာ ဦးခင်အေး (မောင်ခင်မင်-ဓနုဖြူ)၊ ဆရာ ဟိန်းလတ်၊ ဆရာ မြတ်ခိုင်၊ ဆရာ ရဲမိုး၊ ဆရာ ဖိုးနိုင်လင်း တို့ ဆီမှာ သွားသင်လိုက်ဦးဗျာနော်။
ကပ်တီးမူးလဲ ဘာများလဲလို့ ခုမှသိရတယ် အရမ်းနောက်တယ် အားကြီးနောက်တဲ့အကိုလေးပါလားရှင့်၊
ကိုကောင်းမြတ်ကို ဒီလောက်ကြီးတော့မပြောပါနဲ့လား၊ သူ့ခမျာ မသိရှာလို့နေမှာပါ (ခွေးနဲ့ပေါင်းပီးခွေး
ပြောရအုံးမယ်ကပ်ဖားအကြောင်း လွန်ခဲ့တဲ့တပါတ်ခန့်က သံတွဲမြို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လာတဲ့
အခါ ကပ်ဖားတို့ဖားလိုက်ပုံက တမြို့လုံး အုံးအုံးကျက်ကျက် ကိုဖြစ်ရပါလေရောရှင့်၊
ဂျစ်ကားစုပ်လေးနဲ့ ဝန်ကြီးချူပ်သွားရာလမ်းကြောင်းကို အမြီးလေးနှံ့ လျှာလေးထုုတ်ပီး အရူးတစ်
ကောင်လို အရှက်မဲ့စွာ တကောက်ကောက်လိုက်တော့တာပါဘဲရှင်၊
ကျမ ကတော့ အထင်ကြီးပီး မေးကြည့်မိတော့ ဒီလိုပါရှင် ခစ်ခစ်……..၊
သူ့ကိုဘယ်သူမှ ဘာတာဝန်မပေးပါဘူးတဲ့ (ရွံရှာလို့ . ကြောက်လို့)
တာဝန်ရှိသူတွေက မေးတော့ ဟိုဝန်ကြီးကဘဲသူ့ကိုခေါ်သလိုလို၊ ဒီဝန်ကြီးကဘဲ ခေါ်သလိုလို၊
အဲ ဝန်ကြီးလဲပြန်ရော နောက်တစ်နေ့ ဝန်ကြီးခရီးစဉ် နဲ့ သွားထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကူယူပီး ကားစုပ်
လေးနဲ့မြို့ပတ် လှည့်ကြွားတော့တာပါဘဲရှင် …ခစ်ခစ်
ဝန်ကြီးချူပ်ခရီးစဉ် နဲ့အတူပါသွားတဲ့ သတင်းထောက်ဓါတ်ပုံဆရာကလဲ ဝန်ကြီးချူပ်ကိုရိုက်တာမဟုတ်
တော်တော်လဲတတ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံကျော် ကပ်ဖား လူယုတ်မာ..ခစ်ခစ်
ညီမပြောတာ နဲနဲတော့မှားနေသလား….သူပြောနေတာတစ်မျိုးနော်…..အရင်ကတဲက သူနဲ့ရင်းနှီးတယ်
တဲ့….အရင်တလောက စစ်တွေကိုဂေါက်ရိုက် ပွဲသွားစဉ်ထဲက သံတွဲမှ အမတ်တစ်ယောက်မိတ်ဆက်ပေး
ထားလို့ ရင်းနှီးတာလို့ ခုပြောနေတယ်လေ…
ပြီးတော့ ကပ်ဖားထွန်းသန့်ကျော် ခုပြောနေပြန်ပီဗျာ…ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်နေမလားဘဲ….
ဝန်ကြီးချုပ်က သူ့ကို နှုတ်မိန့် နဲ့တာဝန်ပေးထား ခဲ့တယ် တဲ့…
ကျွန်တော်တို့လဲ ကပ်ဖားအကြောင်းပြောနေရတာလဲ ရှက်လှပါပြီ…
မှန်တာပြော ချမ်းသာရပါစေဗျာ…တကယ့်ကို သံတွဲမြို့တစ်မြို့နယ်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ပါ…
ဒီမယ် ကိုကောင်းမြတ် ရှင့်ကိုရှင်ဘယ်လိုလူထင်နေလဲ။သူများကိုကုလားလို ့ခေါ်ပြီးပြောနေရအောင်ရှင်ကကောဘာကောင်လဲ ကုလာဒမဟုတ်လားရှင်။လူမျိ ုးရေးကိုမစော်ကားပါနဲ ့။ကိုယ့်အမျိ ုးကိုယ်ပြန်မဆဲပါနဲ ့။ရှင့်ကို အချက်နှစ်ချက်ဘဲမေးမယ်။သေသေချာချာဖြေ
(၁)ဥိီးချိုကြီး ကားဂိတ်သည်ခရီးသည်စီးမဟုတ်တော့ဘဲ ကုန်ကားဂိတ်လုပ်ထားသည်မှာဆယ်နှစ်ပင်ပြည့်တော့မည်။ထို ့အတွက်ကြောင့် ခရီးများများမရမှာကိုစိုးလို ့ကပ်ဖားကို ဝေဖန်စာပစ်သည်ဆိုသည်မှာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားပြီးပါပီလား။
(၂)ကိုကောင်းမြတ်(ခ)ကပ်ဖားရဲ ့လူ ရှင့်မလဲ US ကယောင်ယောင် သံတွဲ ကယောင်ယောင်လုပ်မနေနဲ ့။ရှင်ဒီစာတွေရေးတဲ့အခါ IPဆိုတာကောနားလည်ရဲ ့လား။မြန်မာနိုင်ငံရဲ ့IP address ကပြ ူးနေတယ်ရှင်ရေ။အဲဒီအတွက်ဘာစဉ်းစားထားပြီလဲ။
ဟုတ်ပါပြီ ရှင့်ဘာသာရှင် တောပြောတောင်ပြော မအိတုံမေးနေတာတွေလည်းကောင်းကောင်းမဖြေ။ဟိုရှောင်ဒီရှောင်လုပ်မနေနဲ ့။ရှင်ရေးတဲ့စာအတွက်တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။မွစ်လင်တွေဟာတကယ်ကိုရဲရင့် ပြီးသစ္စာရှိတယ် စွန်လွှတ်ဝံ့တယ်။ကုရ်အန် ရဲ ့လမ်းစဉ်တွေကိုတသွေမတိမ်းလိုက်နာကြတယ်။ဒါပေမယ့်ရှင် ခုလို အယောင်ဆောင်ပြီး ကပ်ဖားရဲ ့လူလုပ် သူများအကြောင်းတွေလှီးလွဲရေး မွစ်ဆလင် တွေ သိက္ခာကျတယ်။ဒင်း ကိုကောင်းမြတ် ရေ ရှင်ဟာလေ မွစ်လင်ဖြစ်အုံးတော့ မွစ်ဆလင်မဟုတ်ဘူး “မွစ်ဆလိမ်”ဘဲဖြစ်လိမ့်။ခင်ဗျားကြီးသတ္တိတွေဒီလောက်ရှိနေရင်ရှင်နဲ ့ကျွန်မ အပြင်မှာတွေ ့ကြမယ်။တကယ့်လက်တွေ ့မှာဒီလို ခရီးသွားခွင့်မရတာ လွန်ခဲ့တဲ့၁၉၉၈လောက်ကဘဲရှင်။သွားမယ်ဆို ဟို မယက ပြောရ ခရိုင် လဝက ပြောရအဆင့်ဆင့်သွားရတာ။ဒါတွေရှင်မသိဘဲရမ်းသန်းပြီး ဦးချိ ုကြီးနဲ ့ဦးခင်မောင်မြင့်လက်ချက်လို ့တတစ်ချပြောနိုင်တာ ဘာကြောင့်များလဲရှင်။ရှင်ကိုနားရွက်ဆွဲပါးရိုက်ပြီးခံစားနေရတဲ့မိန်းမတွေရဲ ့အဖြစ်ကိုနားလည်အောင်ပြောပြလိုက်မယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်ရေ.. ဘယ်လိုလဲ။ တက်လာတာမကြာသေးဘူး နာမည်အလွဲသုံးခံနေရပြီထင်တယ်။ သေသေချာချာ စစ်ဆေးရင် စစ်ဆေး.. မစစ်ဆေးရင် ဝန်ကြီးချုပ်တယောက် တွံတွေးခွက်ပက်လက်မျော တော့မယ်နော်။
အင်းဂျ…၊ စိတ်မကောင်းစရာပါဂျ…၊ အဲ့ဒီ အခွင့်အရေးသမားကလိုက်ပီး ကပ်နေတာကိုးဂျ…၊
မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ အရှက်မရှိလိုက်ကပ်နေတတ်တယ်ပြောကြပါတယ်ဂျ..။ ခုလဲ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကပ်ညပ်
ပီးရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ကိုင်ပီး မြို့ပတ် လိုက်ကြွားနေတယ်တဲ့ဂျ…၊ ဟိုတစ်နေ့ကလဲကြား
လိုက်ပါသေးတယ်ဂျ..၊ ဝန်ကြီးချုပ်က နှုတ်မိန့်နဲ့သူ့ကို မှာခဲ့တယ်ဆိုလား..လုပ်ငန်းရှင်တွေတစ်ချို့ကို သူ့အလိုကျဘာလုပ် ညာလုပ်အမိန့်တွေပေးနေလို့
အမိန့်ပေးခံရတဲ့ သူတစ်ချို့ ( ဟုတ်မှန်းမဟုတ်မှန်းမသိ) စိတ်ညစ်နေကြတယ်ပြောပါတယ်ခင်ဂျ.၊
ဂျပန်ဖက်ဆစ် အလိုတော်ရိလို တော်တော်ဆိုးတဲ့သူ ပါဘဲဂျ….၊
သူ့ကိုသူ ( B.S.C ) တဲ့ဗျာ………….မဟုတ်ဖူးဗျ…….ဒီကောင်လူလိမ်အကြီးစား…..
ဘွဲ့မရခဲ့ဘူး တဲ့ဗျာ………လူတောတိိုးတာမှာ မျက်နှာမငယ်ရအောင် ဘီ.အက်စ်.စီ
ခုလဲ အရှက်မရှိ ကြည့်မရ မနာလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပီး သတင်းတင်နေ
ကျွန်တော်တို့လဲ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ကြည့်မနေနိုင်တော့လို့ ဝင်ရေးရတာပါ.
အင်းနော် ကပ်ဖားရော ကောင်းမြတ်ရော အရှက်ဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေပါဘဲ ၊ လူစိတ်လုံးဝမရှိတာ
တော့အသေအချာပါဘဲရှင်၊ သတင်းအမှားကြီးကိုသတင်းအမှန်လုပ်ပီး ခပ်တည်တည်အရေးအသားတွေ
နဲ့ ရေးနေပုံကတော့ အံ့ဩလောက်ပါပေတယ်၊
ဘာတဲ့ us ပြန်ရောက်သွားလို့ဆိုလား ဒီဝက်ပ်ဆိုဒ် ကိုဖတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလား၊ ခုတော့အလိမ်
တွေ ရှေ့နောက်စကားမညီတာတွေ နဲ့ တော်တော်ယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့သူပါဘဲရှင်၊
လောကကြီးမှာ ဒီလိုယောင်္ကျားဖာသည်မျိုး ဒီတစ်ခါဘဲတွေ့ဘူးပါတယ်၊
စာရေးသားပုံလေးကြည့်ရတာ အခြောက်လက္ခဏာ တွေမြင်နေရတယ်ရှင့်၊
ရီစရာကောင်းလိုက်တာ ခုမှသိရတယ် နက်ဖန်တော့ BSC အတုကိစ္စ ကိုကြေငြာမောင်းခတ်ရအုံးမယ်၊
(မှတ်ပုံတင်အတု / BSC ဘွဲ့ အတု) အတုအယောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ကပ်ဖားလူယုတ်မာ ကျဆုံးခန်းသို့
တော်ပါတော့ဗျို့… မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်မဟဲ့ဆိုပြီး Personal တွေကို ဒီနေရာမှာ လာရောက်ဝေဖန် တိုက်ခိုက်နေကြတာ မြင်ရတာ တော်တော်လေး ထော်လော်ကန့်လန့်နိုင်လွန်းတယ်ဗျို့.. အရင်က တင်ခဲ့တဲ့ Post နဲ့ခုဟာ တစ်ခုခုတော့ မှန်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သေချာတာကတော့ တစ်ခုခုကတော့ မှားနေမှာပဲ။ မသိလိုပါဘူး။
ပြောချင်တာတစ်ခုကို အားမနာတမ်းဆိုရလျင်ဖြင့် အများပြည်သူ၊ ဖတ်ရှုသူများ အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိစေနိုင်သော၊ ဗဟုသုတ ရနိုင်စေသော သတင်းများသာ ဖြစ်စေလိုပါတယ်။ အတင်းများတော့ မရေးစေလိုပါဘူး။ ဟိုကတင်၊ ဒီကတင်နဲ့ ကြာလာရင် ရပ်ကွက်ထဲက မိန်းမပျက်တွေ စကားဝိုင်းလို ဖြစ်လာမှာလဲစိုးသား။ သူကြီးက ဘယ်လိုမှမနေ၊ ဘာမှ ဝင်မပြောပေမယ့် ကျွန်တော်က တင်သမျှတွေတိုင်း ဖတ်နေတဲ့စာဖတ်သူဖြစ်နေတော့ ခုလိုစာတွေမြင်နေရတာ စိတ်ထဲမှာ ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်မိသဗျား။
အစိုးရလုပ်ကိုင်ပုံတွေထဲက ခွေးသွားစိတ်လေးတစ်ခုအကြောင်းကို ဇာချဲ့ပြနေတာ ကုလားတွေရော၊ ဗမာတွေရောပါလာပြီ။ ခုပြောနေကြတာကြည့်ရင်လဲ အဲဒီထဲက လူတွေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေသလားထင်ရတယ်။ ဒီအဖြစ်တွေက ရခိုင်မှာတင်မဟုတ်ပါဘူး၊ နေရာအနှံ့ဖြစ်ပျက်နေတာမို့ ရပ်တန်းကရပ်လို့ အတင်းမဟုတ်တဲ့ သတင်းအနေနဲ့သာရေးသားတင်ပြကြမယ်ဆိုရင် ကောင်းလိမ့်မယ်ဟုထင်မိကြောင်း…
(ကြိုက်သော်ရှိ၊ မကြိုက်သော်ရှိ၊ ဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်)
စကတည်းက ပစ်စာသဘောဖြစ်နေတာမို ့.. လုပ်ကိုင်နည်း မမှန်ဘူး..ပြောခဲ့တာပဲ..။
အခုတော့ ဒါမျိုးဟာတွေ.. အကုန်ရပ်တော့မှနဲ့တူတယ်…။
ပြောရရင်.. ကျုပ်က ဘယ်သူတွေဘယ်ကလာတယ်..မြင်ရတာမို ့… အခြေအနေတချို ့ကို နည်းနည်းတော့ ..သဘောပေါက်သလိုဖြစ်နေလို့.. လွှတ်ထားလိုက်တာပါ..။
ကဲ.. မန်းနိုင်ခွင့်တွေကို ရပ်လိုက်ပါပြီ..။ ဆက်မတင်ကြပါနဲ့တော့နော..။